Arag Sawirro laga soo qaaday madaxdii Kismaayo isugu tagtay oo hadal heyn xoogan ka dhaliyay baraha bulshada! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Arag Sawirro laga soo qaaday madaxdii Kismaayo isugu tagtay oo hadal heyn...
Kismaayo (Halqaran.com) – Saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa qabsaday sawirro laga soo qaaday masuuliyiinta ku sugan Kismaayo, kuwaasi oo halkaasi u jooga ka qeyb galka caleema saarka madaxweynaha aqoonsiga aan ka heysan dowladda Soomaaliya.
Madaxda sawiradooda baraha bulshada qabsaday waxa ka mid ah madaxweynayaashii hore dalka soo maray iyo kuwa maamul gobolleedyada iyo mucaaradka oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Sawiradaan ayaa ah kuwa laga soo qaaday xilli ay ku jireen masaajid, iyagoo aqrinaayo qur’aanka Kariimka.
Haddaba Hoos ka daawo Sawirrada:
hadal heynta barasha bulshada
Madaxdii kismaayo gaaray